Lego lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
avy ao Lego dia afaka manorina tontolo tsy mampino, hameno ny mponina, mamorona ny fitaterana sy ny fanorenana Lego sanatria ady sy handresy ny dragona. Impossible eto mba hanao, satria ny mpamorona angano vaovao. Manomboka ny afaka hilalao lalao an-tserasera Lego sy hahita ny zavatra amin'ny mpamorona ny andian-dahatsoratra manolotra ny firenena, nivory tamin'ny trano biriky sy ny singa. Ao amin'ny tsirairay dia hifanena tantara mahavariana, feno zava-nitranga, Fantasy, mazia, tsisy fetra azo. Lasa Knight, mpandefa zana-tsipìka, ny olo-mahery na ny mpiady amin'ny vampira.
Lalao Superhero Race
LEGO Ninjago Prime Fanjakana
LEGO City Adventures Mampiorina sy miaro
Ninjago Contest avy ny singa
Ny lego ninjago Super mahatalanjona boky an-tserasera
Lets Go Build A
Lego Monster Fighters: The Tales Monsterland
Ninjago: Retour ny Oni
Fahatsiarovana Car Lego
The Lego Movie 2: Fanafihana Jeneraly Jeneraly
Ny LEGO Film 2 Generaal Chaos Valt Aan!
Hero Factory: Mission Savage Planeta
Mialà ao amin'ny nosy an-tanety
NinjaGo: Lloyd manohitra ny fomba fiasan'ny Garmadons
Lego Alien Conquest: Fanararaotana avy amin'ny planeta
Prime Empire: Ny hazakazaka lehibe
Puzzle mahery fo mahery fo
Tinja Go: Tournament der Tapferen
Lego Star ady: Battle Run
Hazakazaka asa tanana fiara
Zoma Alina Funkin 'LEGO
Puzzle piozila Ninjago
Boky fandokoana Lego miverina any an-tsekoly
Any amin'ny tanin'ny tsy misy olona
Lego Ninjago: Tournoi des Brave
Lalao Lego tamin'ny Category:
Lego Legends ny Chima
Farany Lego lalao
Lalao Online Rehetra Lego lalao an-tserasera
ny tantaran'ny Lego
Amin'ny maha-zaza, izahay nilalao rehetra ny mpamorona, mpanamboatra no misy amin'ny dikan-maro samy hafa, nefa ny tena dia Lego voly. Nisy kilalao io indray tamin'ny 1932 tany Danemark. Ny mpanoratra dia ny mpandrafitra, fa am-po - ny tena artista, izay foana no manao asa tanana mahaliana.
Ny voalohany dikan-Lego mpamorona ihany koa feno hazo sy naneho ny biriky, izay mifandray amin'ny tsirairay. Hatramin'ny 1949, dia nanomboka hanao kilalao vita amin'ny plastika sy manana mahavonjy fiantraikany eo amin'ny ho ela velona. Fa ny tena mahagaga dia ny voalohany sy ny farany Lego haben'ny tonga lafatra ho an'ny tsirairay.
Games Lego solosaina
Lego lalao - dia kely biriky izay mifandray sy misy afaka manao na inona na inona tianao. Amin'ny fampiasana ny saina, Andrandrao trano tamin'ny andry, tohany, tilikambo, varavarankely sy ny varavarana. Rehefa ny famoronana dingana reraka, tsy manam-potoana mba mijery ny manodidina, ny fientanentanana niely ho goavana fitaovana sy efa nahita vaovao tetezana, trano, mitovy lapa, tilikambo, ary manodidina ireo no lehibe hazo, fiandrasana bisy, nisy fiara tao amin'ny garazy sy ny sambo amin'ny ny Tsy nahafoy. Nampisaratsaraka Lego mitombo eny an-dalambe, ary ny manodidina na dia velona iray manontolo, toy ny Legoland - Lego firenena eo amin'ny saikinosy ny Jutland.
Manasa anao izahay mba Lego Lalao mba milalao na dia tsy mandao ny trano toy ny plastika Firenena ny biriky miloko isan-karazany nipetraka eo amin'ny lalao vavahadin-tserasera sy manaiky izay rehetra maniry ny hampitaovana izany sy ny faritaniny. Lego lalao rehetra mijery mitovy ny mpamorona ny tenany. Ny Knights sy ny soavaly nangonina avy any amin'ny tsirairay sombintsombiny mba hiady amin'i Lego biby goavam-be, teny an-dalana manenjika lasa ny Lego lapa, ary manangona izay rehetra andalovany vola madinika. Heats amin'ny sambo ihany koa ny maka toerana eto amin'ity firenena ity voly, ary manga sambo ny onja sambo efa nivory, vonona ny handresy ny singa sy ny sambo ho any amin'ny tsipika fahatongavana aloha. Na dia ny andriambavy sambatra velona mandrakizay araka amin'ny lapan'ny mpanjaka avy amin'ny biriky sy hitondra soavaly mamy karaoty. Fa ny hisambotra Fifaliana eny amin'ny rivotra, dia ilaina ny manampy ny Racehorse Hanketo mampiasa ny fitendry. Dia ho fantatrao fa eny an-dalambe nandeha nanamboatra milina sy ny mpanamory dia miomana ny handeha ho any amin'ny nandositra. Near ny mpandahateny refuel fiara ho any amin'ny minitra manaraka ny firotsahana amin'ny lalana be olona an-dalana. Ny mpiaro ny morontsiraka fisafoana ny rano amoron-tsiraka, ary ny toerana mpiambina hiady eo amin'ny mazava sabatra. Ny firenena Legoland fiainana feno hotakotaka, ary afaka mandray anjara mavitrika ao izany amin'ny manomboka milalao Legos amin'izao fotoana izao. Raha ny marina, tena kely ny foto-kevitra toy izany manompo ifotony pastimes mahazatra. Mbola ho:
mba handresy ny sakana,
Ny ady fahavalony,
mba hanangona tombontsoa.
Fa, satria ny zavatra rehetra dia atao amin'ny tsy misy dikany izany, Lego, ianao, dia hahatsapa ny zava-baovao ny gameplay sy fitiavana bebe kokoa amin'ny biriky mba hanangona ny sivilizasiona vaovao. Azo antoka, Lego lalao amin'ny aterineto, izany no zava-baovao ho antsika eto amin'izao tontolo izao ny lalao, fa hevitra tany am-boalohany, dia manana ny zo ho mifanitsy amin'ny ny fitsarana. Matoky isika fa ny foto-kevitra tokoa ny fahafinaretana ho tia anao, ary ianao dia imbetsaka manondro fizarana io mba hahita ny mpiaro, tontolo vaovao ny fialam-boly, novonoina tamin'ny miloko plastika, fa toa tena velona, ​​azo tsapain-tanana isan-karazany. Faly izahay ny mahafantatra fa nisy efa be dia be ny mpankafy ny lalao Lego, izay mahita izany ho toy ny fahafahana hitsidika virtoaly Legoland, izay famantarana rehetra sy ny mampiseho ny lafiny maro amin'ny fiainana ny mponina, ka samy hafa, fa hatrany am-boalohany.